Polka Marina ga - akwụsị iji ụgbọ mmiri gafee ụbọchị - Thrilltalk.com
Home/Nieuws/Polka Marina ga akwụsị ụgbọ mmiri ma taa
0 20 Ejiri 2 gụọ
Taa bụ ụbọchị ọrụ ikpeazụ nke Polka Marina in Efteling. Emepere mma ahụ na 1984 ma ọ dị na mpaghara isiokwu Ruigrijk. Polka Marina yiri otu carousel dị ka mma. Ihe nlegharị ahụ wuru Dutch Vekoma si Vlodrop. Mgbe afọ 36 gasịrị, “agba egwu nke oké osimiri” nwere ike ịkwụsị ịkwọ ụgbọ mmiri ma daa jụụ ruo mgbe ebighị ebi.
ọnụ ọgụgụ nke ugbo ala 23
Ike 2 mmadụ / ụgbọala
Onride foto Enweghị
Mpaghara isiokwu Mụrụmụrụ
Ofdị mma Koggenmolen
Onye ahịa Efteling
Ọnọdụ Emechiri emechi kpamkpam
Oghere Ọnwa Nke Anọ 14, 1984
akwụ ụgwọ 1,5 nde guild
Gwuo akwu ọhịa na 2021
Kedu ihe ị ga - eme ma ọ bụrụ na ị pere mpe maka ndị na - agagharị na ị ga - eche maka ụmụnne nwoke, ụmụnne nwanyị, ụmụ nwanne ma ọ bụ ụmụ nwanne nwanyị ga - aga Python, Joris en de Draak or Flying Dutchman? Site na oge ọkọchị ọzọ ị nwere ike igwu egwu na nke ọhụrụ igwu ohia akwu!. Oke ohia nke ihe dika 1200 m2, nke enwere ike ichota ihe di iche iche nke ndi mmadu n’egwuregwu.
Mgbe a na-emebe ma na-emepe ọhịa a, ndị ọbịa nwere ma ọ bụ na-enweghị mmachi a na-ahụ anya ma ọ bụ nke a na-adịghị ahụ anya ka a na-atụle. Onye na-ese ihe na-ese ihe mgbe ochie bụ Robert-Jaap Jansen na ndị otu egwuregwu ga - enyere aka na nke a site n’aka ndị ndụmọdụ na ndị ọkammụta dị iche iche n’ọbara egwuregwu ‘agụnyere’. Na kpọọ ọhịa Nest! ụmụaka niile ga-egwu egwu n'oge na-adịghị anya.
Dịka ọmụmaatụ, enwere ike ịnweta ụzọ na-agafe n'oké ọhịa maka ụmụaka nọ n'oche nkwagharị na enwere ngwaọrụ egwuregwu dịka slide oche oche nkwagharị na igbe sandbox. Ọhịa ahụ nwekwara ebe ndị na-akpali akpali ebe ụmụaka nwere ike ịchọta obere ezumike.
Efteling etinye ego 2 nde euro ọhụrụ. Gbara gburugburu na isi na-adọrọ mmasị na Ruigrijk bụ 'akwu!' site n'oge ọkọchị nke 2021 ebe dị mma ebe ụmụaka nwere ike igwu egwu nke obi ha ma maa onwe ha aka. A ga-amalite iwu ụlọ na Jenụwarị 2021. Maka oke ọhịa, a na-eji ihe okike eme ihe, nke dabara na ọnọdụ ahụ, n'etiti De Vliegende Hollander na Gallery Egwuregwu. A ga-echekwa osisi ndị dị ugbu a dị ka o kwere mee ma tinye ya na imewe.
Akwụ! dochie ụgbọ mmiri ụgbọ mmiri Polka Marina
Polka Marina agabigala afọ iri atọ na isii ma na ngwụcha ndụ ya. Iji mee ka mma dị n'oge a, ọ ga-abụrịrị ọtụtụ ihe ga-efu. Na Nọmba Nọvemba 36, 30 ị nwere ike ịnya ụgbọ mmiri maka oge ikpeazụ. Ga-apụ n'anya na mbido 2020 Polka Marina site na square na ebe a na-edozi ya. Ndị na-eto eto bụ ndị ọbịa nke Ruigrijk nwere ike igwu egwu site na oge ọkọchị nke 2021 kpọọ ọhịa Nest!
mma Na-agbatị marina akwu polka Polka Marina kpọọ ọhịa Gwuo akwu kpọọ Vekoma
Ntụrụndụ ogige adịghị emetụta corona jikoro